मास्क लगाउन किन अटेर गर्छन् पुरुष ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
मास्क लगाउन किन अटेर गर्छन् पुरुष ?
२२ श्रावण २०७७ ६ मिनेट पाठ
फर्नान्डो दुआर्ते, बिबिसी वल्र्ड सर्भिस
कोरोनाको महामारीका बीच मोनिकाले आफ्ना पति इडुआर्डोलाई हरबखत मास्क लगाएर हिँड्न सम्झाउँथिन् तर उनका पति झिँजो मानिरहन्थे । मास्ककै कारणले दुवैबीच वादविवाद र मन मुटाव हुन थालेपछि मोनिकाले उनलाई छाडेर सात वर्षे छोरो बोकेर माइती हिँडिन् ।
मोनिका ब्राजिलको राजधानी रियो डि जेनेरिया नजिकको एउटा सहर नितरोईमा परिवारसहित बसिरहेकी थिइन् ।
मोनिका भन्छिन्, ‘मलाई श्वासप्रश्वासको रोग छ र यस्तो रोग कोरोना संक्रमणको अत्यधिक जोखिमयुक्त मानिन्छ । तर मेरा श्रीमान् चाहिँ अनावश्यक चिन्ता लिएको भन्दै सधैँ गनगन गरिरहन्थे ।’
उनका पतिको तर्क थियो, घरबाहिर भीडभाडमा जाने भए पो मास्क लगाउनु जरुरी छ त ! तर भाइरस त हावामा जहाँतहीँ तैरिने हुनाले भीडभाडमा गइरहनु पर्ने पनि होइन । जहाँ पनि संक्रमणमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । यही सोचेर मोनिकाले गरेको अनुरोधलाई उनका पतिले लत्याउँदै आइरहेका थिए ।
मोनिका भन्छिन्, ‘उनलाई छोरा र मेरो स्वास्थ्यमा खतरा उत्पन्न गराएको कुरामा कुनै मतलब थिएन । त्यसैले मैले उनलाई केही समयका लागि छाड्नै पर्ने अवस्था आयो ।’
पुरुष नै बढी किन प्रभावित ?
मोनिकाका पति मात्र होइन, संसारभरिकै लोग्ने मान्छेहरु मास्क लगाउन रुचाउँदैनन् । जोन्स होप्किन्स विश्वविद्यालयको आँकडाअनुसार ९ जुलाई सम्म संसारभरमा १२ करोड मानिस कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेका छन् र साढे पाँच लाख मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । अधिकांश आँकडामा मृत्यु दर पुरुषमै बढी देखिएको छ ।
अध्ययन र सर्भेहरुले देखाएको छ, पुरुषहरुको मृत्यु बढी हुनुको मुख्य कारणमा पुरुषहरुले सुरक्षात्मक उपकरणहरु र मास्क लगाउन अनिच्छा व्यक्त गरेको नै देखिन्छ । इतिहासका अन्य महामारीका बेला पनि पुरुषहरुमा यस्तै बेहोरा देखिएको केही अध्येताको भनाइ छ ।
कोरोना भाइरसविरुद्ध कुन मास्क प्रभावकारी ?
कोरोनाको संक्रमणबाट बच्नका लागि मास्क लगाउने सल्लाह व्यापक रुपमा दिइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले पनि ‘मास्क लगाउनु कोरोनाको संक्रमण बढ्नबाट रोक्नुको एउटा व्यापक रणनीति हो ।’ हुन त डब्लुएचओले कपडाको मास्क लगाउनु त्यति राम्रो होइन भनिरहेको छ तर पनि केही नहुनुभन्दा कानो मामा ठीक भनेजस्तो मास्कलाई अनिवार्य मानिएको छ ।
मास्ककै कारणले संक्रमण कम गर्न सकिन्छ भने पुरुषहरु यसलाई लगाउन किन मानिरहेका छैनन् ?
मिडलसेक्स विश्वविद्यालय बेलायतका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक भ्यालेरियो क्यापरेरो तथा बर्कले म्याथम्याटिकल साइन्स रिसर्च इन्स्टिच्युटका क्यानडेली गणितज्ञ हेलेनी बासिलोको संयुक्त अध्ययन हालै प्रकाशित भएको छ र यो निकै चर्चित पनि भएको छ ।
यी दुवै विशेषज्ञले अमेरिकामा करिब २५ सय मानिसमा एउटा सर्भे गरेका थिए र के पाए भने मास्क लगाउनु कमजोरीको निशानी हो भन्ने धारणाका कारण मास्क लगाउन मानिरहेका छैनन् ।
अनुहार ढाक्नु जहाँ अनिवार्य छैन, त्यहाँका मानिसले यसलाई स्वीकार गरिरहेका छैनन् ।
यस सर्भेमा घरबाट बाहिर निस्केको खण्डमा मास्क लगाउने महिलाहरुको संख्या दोब्बर रहेको पनि देखिएको थियो ।
पुरुषहरुले भने महिलाका तुलनामा संक्रमणबाट कम प्रभावित हुन्छु भन्ने आत्मविश्वासका कारण मास्क नलगाएको धारणा राखेका थिए जबकि तथ्यांक उल्टो छ । पुरुषहरु नै महिलाको तुलनामा बढी प्रभावित हुने गरेका छन् ।
अर्को एउटा अध्ययन अनुसार, पुरुष हात धुन त्यति धेरै इच्छुक हुँदैनन् । ६५ प्रतिशत महिलाले आफू नियमित रुपमा हात धुने बताइरहँदा ५२ प्रतिशत पुरुषहरु मात्र हात धुने कुरामा सकारात्मक थिए ।
राजनीतिबाट प्रभावित व्यवहार
हालै गरिएको अर्को एउटा अध्ययनले अर्को कुराको पनि खुलासा गरेको छ । महामारीका बेला पुरुष र महिलाको व्यवहार फरक हुनुमा राजनीतिले ठूलो भूमिका खेल्नेसमेत देखिएको छ ।
कयौँ सर्भेमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरुले राष्ट्रपतिको सिको गर्दै मास्क लगाउन र सामाजिक दुरी कायम गर्न रुचि नदेखाएको पनि खुलासा भएको छ ।
यस मामिलामा स्त्री र पुरुषमा फरक प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । रिपब्लिकन पार्टीका ६८ प्रतिशत महिला समर्थकहरुले घरबाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने बताएका थिए भने ४९ प्रतिशतले मात्र मास्क लगाएर मात्र बाहिर निस्कने जनाएका थिए ।
मास्क प्रयोगले मृत्युमा कमी
मास्कको महत्व त्यो बेला अझ बढ्यो, जब कोरोना भाइरस हावामा उत्पन्न हुन्छ र ठूला हाच्छ्यूँका कणभन्दा सानाबाट बढी फैलने सम्भावना हुन्छ भन्ने पत्ता लाग्यो ।
जापानी वैज्ञानिकहरुले गरेको अध्ययनले २२ देशमा मास्क प्रयोग गर्दा मृत्युको संख्या घटेको देखिएको थियो ।
अनुसन्धान संस्था युगोको मत सर्भेको विश्लेषणका आधारमा वैज्ञानिक डाइसुके मियाजावा र जेन केनले आफ्नो अध्ययनमा जुन देशले मास्क लगाएको पाए, तिनीहरुमध्ये प्रति दस लाख संक्रमितमध्ये मृत्यु हुनेको संख्या निकै कम थियो ।
मृत्यु दर बढी भएका २२ देशका पुरुषहरुले मास्क प्रयोगमा रुचि नराखेको पाइएको थियो । तीमध्ये बेलायती नागरिकहरु पनि एक थिए ।
पुरुषहरु अति आत्मविश्वासको शिकार भएका हुन् त ?
युनिभर्सिटी अफ कोपेनहेगनमा बिहेभियरल साइन्टिस्ट क्रिस्टिना ग्रेवर्ट मास्क लगाउने महिला र नलगाउने महिलाहरुबीचको यो फरक देखेर चकित भने छैनन् ।
जोखिमयुक्त समयमा पुरुष र महिलाले बेग्लाबेग्लै किसिमको व्यवहार देखाउने विभिन्न अध्ययनले प्रमाणित गरेको उनको भनाइ छ ।
‘डेनमार्कको राजधानीमा कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएका प्रयासमा महिलाहरु कति गम्भीर छन् भन्ने तपाईंले सहजै देख्नुहुन्छ,’ क्रिस्टिना भन्छिन्, ‘कोपेनहेगनमा जब कोरोनाकालमा वन वे स्ट्रिट खोलिएको थियो, त्यो बेला अधिकांश पुरुषहरु गलत बाटो हिँडिरहेका थिए । महिलाहरु भने भनेअनुसार नै नियमपूर्वक हिँडिरहेका थिए । सरकारले वन वे स्ट्रिट खोल्नुको मुख्य कारण थियो– मानिसहरुले एकअर्काको विपरीत अनुहार हेर्दै हिँड्नु नपरोस् ।’
पुरुष र महिलाहरुको व्यवहारमा यो फरक गएका महामारीका बेला पनि देखिएको थियो । मेक्सिको सिटीमा भएको एउटा अध्ययनमा सन् २००९ मा स्वाइन फ्लुको महामारीका बेला पुरुषका तुलनामा महिलाहरुले बढी नै मास्क लगाएका थिए ।
एसियाली देशमा त झन् मास्क लगाउनुलाई नराम्रो मानिँदैन । यस्तो ठाउँमा पनि पुरुषहरुले मास्क नलगाएको पाइएको थियो । २००२–०३ ताका सार्स महामारी फैलिएका बेला हङकङमा महिलाहरु हात धुने र मास्क लगाउने कुरामा सावधान देखिएका थिए भने पुरुषहरु त्यसमा त्यति इच्छुक देखिएका थिएनन् ।
के पुरुषहरु बढी नै अल्छी छन् त ?
अध्ययनबाहेक क्रिस्टिना गे्रवर्टको आफ्नै अनुभवले पनि धेरै कुरा सिकाएको छ । उनको अनुभव छ, कारको बीमा गर्ने कम्पनीले पुरुषको तुलनामा कम बीमा शुल्क लिने गरेका छन् । संसारभरि नै सडक दुर्घटनामा बढी जसो पुरुष नै शिकार हुने गरेका छन् । तर संसारभर नै तुलना गर्ने हो भने महिलाभन्दा बढी पुरुष चालक छन् । तसर्थ, दुर्घटना हुँदा पुरुष बढी हुनु स्वाभाविक नै हो भन्नेको पनि कमी छैन ।
लण्डनस्थित शोधकर्ता भ्यालेरियो क्यापरेरो स्वयं आफू पनि मास्क लगाउने कुरामा त्यत्ति धेरै रुचि नराख्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘केही महिना पहिले जब म इटाली गएको थिएँ, मैले त्यहाँ रहुञ्जेल मास्क लगाएँ । त्यहाँ मास्क लगाउनु अनिवार्य थियो । म त्यहाँ निकै सावधान थिएँ र सोसल डिस्टेन्सिङका नियमहरु पालना गरिरहेको थिएँ । त्यो बेला मलाई मास्क लगाउनुपर्ने बोध पनि भयो ।’
तर उनको भनाइ छ, ‘अनिवार्य गरिएको खण्डमा स्त्री होऊन् या पुरुष दुवैले उत्तिकै रुपमा त्यसलाई पालना गर्दारहेछन् भन्ने म आफैँ पनि त्यसको उदाहरण हुँ । त्यसैले पुरुषहरु लापरवाही छन् र मास्क लगाउन अल्छी गर्छन् भन्ने कुरामा अलि दम छैन ।’
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७७ १४:०० बिहीबार